गायक बन्छु भनेर भागेर अाएको थिएँ काठमाडौं-हरि लम्साल – Everest Times News
गायक बन्छु भनेर भागेर अाएको थिएँ काठमाडौं-हरि लम्साल
नवलपरासीको कावासोतीमा जन्मिएका हरि लम्साल चर्चित संगीतकार हुन् । सानैदेखि सांगीतिक क्षेत्रमा रुचि लिएका लम्सालमा संगीतप्रतिको यति धेरै लगाव थियो कि उनी परिवारको सहमतिबिना संगीत सिक्न भागेर काठमाडौं आए । सुरुमा गायक बन्ने दौडमा लागेका उनी गायन क्षेत्रमा त खासै जम्न सकेनन् । तर संगीतकारका रुपमा भने उनले सोचेभन्दा बढी सफलता पाए । सांगीतिक क्षेत्रमा साधना र संघर्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उनै लम्सालसँग एभरेस्ट टाईम्सका लागि गरिएको कुराकानीको सार :
तपाईको सांगीतिक यात्रा कहिलेदेखि सुरु भयो ?
संगीत क्षेत्रप्रति मेरो सानै देखिको लगाव थियो । स्कुलमा पढ्दादेखि नै विभिन्न कार्यक्रममा गीत गाउने र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्थें । २०५६ मा काठमाडौं आएर संगीत सिक्न थालेँ । २०५८ मा ‘नरोए प्रिया’ नामको गीतमा संगीत दिएँ । सुरेशराज अधिकारीले गाउनु भएको थियो । व्यवसायिक रुपमै संगीत क्षेत्रमा लागेको भने २०६१ देखि हो ।
सांगीतिक क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ भन्ने सोच कसरी आयो ?
मेरो रुचिको विषय थियो । मैले स्कुल तथा गाउँमा फाट्टफुट्ट गीतहरु गाउँदा मलाई साथीभाई तथा स्कुलमा गुरुहरुले निकै हौसला दिनुहुन्थ्यो । त्यही हौसला र अग्रजहरुको सहयोग र मायाले नै यस क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरित ग¥यो ।
नवलपरासीबाट काठमाडौं आएर संगीत क्षेत्रमा स्थापित हुन के–कस्ता संघर्षहरु गर्नु प¥यो ?
अनौठो कहानी छ । संगीतप्रति मेरो यति धेरै लगाव थियो कि म जसरी पनि संगीत पढ्न चाहन्थें । एसएलसीपछिको मेरो लक्ष्य संगीत पढ्ने र गायक बन्ने थियो । तर घरमा बुवा आमा वृद्ध भएका कारण एसएलसीपछिको पहिलो वर्ष मैलै गाउँमै पढ्नुपर्ने भयो । करिब एक वर्ष मैले गाउँकै कलेजमा पढें । तर संगीत सिक्ने भूत चढेपछि म घरबाट भागेर काठमाडौं आएँ । काठमाडांैका सुरुवाती दिनहरु केही अप्ठेरा थिए । पछि परिवारको सहयोग मिल्यो, विस्तारै संगीत क्षेत्रमा पनि स्थापित हुँदै गइयो जसले गर्दा संघर्ष र समस्याकाबीच पनि अघि बढ्न सकियो ।
गायक बन्छु भनेर हिड्नु भएको मान्छे कसरी संगीतकार बन्नु भयो त ?
म गायक पनि हो । अहिलेसम्म लगभग २० वटा जति गीत गाएको पनि छु । तर मेरो गायनलाई भन्दा स्रोताहरुले संगीतलाई बढी मन पराईदिनु भयो । व्यक्तिले जीवनमा गर्छु भनेका सबै कुरा पुरा हुँदैनन् । उसको क्षमता जुन क्षेत्रमा बढी छ त्यसैमा सफल हुने हो । तथापि म गायक हुन नसकेको भन्ने होइन । मैले गाएका कतिपय गितहरु हिट पनि भएका छन् । स्रोताहरुले संगीतकारका रुपमा बढी मन पराउनु भयो त्यसैले यसमा बढी चर्चा मिलेको हो । मलाई मेरो आफ्नो गायकीमा अझै निखारता ल्याउनु पर्छ भन्ने पनि लाग्छ । संगीतमा स्रोताहरुको माया र मेरो पनि बढी आत्मविश्वास भएकाले यस क्षेत्रमा बढी चर्चा कमाउन सकिएको हो ।
हालसम्म कति गीतमा संगीत भर्नुभएको छ ?
झण्डै सात सय गीतमा संगीत भरेको छु । त्यसमध्ये अधिकांश गीतहरुले राम्रै चर्चा पाईरहेका छन् ।
तपाईले संगित भरेका केही चर्चित गीतहरुको नाम भनिदिनुहोस न ?
राहुल वैद्यको नजाउ टाढा तिमिलाई, जेजे हुने हो हुन्छ यहाँ पर्दा पछाडी नै , कसले सुरुवात ग¥यो होला यो माया भन्ने चिज, पानीको फोकाजस्तै भयो हाम्रो माया, तिमीसँग हुँदैन प्यार, विश्वासमा छलगरी, प्रेम दिवसलगायत । तथापि आफूले संगीत भरेका हरेक गीतहरु राम्रा लाग्छन् ।
संगीतकारको रुपमा दर्शक तथा स्रोताहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ ?
उहाँहरुको माया र सम्मान कै कारण आज यो स्थानसम्म आइपुगको छु । तथापि अझै पनि गीतमा संगीतकारको भूमिकाका बारेमा स्रोताहरु अलमलमा हुनुहुन्छ । सामान्यतया गीतमा गायकको भूमिकालाई मात्र बढी महत्व दिईन्छ । तर त्यसको सिर्जना, म्युजिक कम्पोसिजन लगायका विषयहरु निकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । यस विषयमा कतिपय स्रोताहरु अनविज्ञ हुनुहुन्छ । स्रोताहरुमा संगीत क्षेत्र प्रतिको अनविज्ञताको कारण यस्तो भएको हो जस्तो लाग्छ ।
यस क्षेत्रमा टिकिरहन कत्तिको गाह्रो छ ?
यो यस्तो क्षेत्र हो जहाँ तपाईले एउटा राम्रो संगित उत्पादन गरेर सधैलाई पुग्दैनन् । संगीत क्षेत्रमा सधै संघर्ष छ । हरेक वर्ष उत्कृष्ट प्रस्तुति दिन सकिएन भने छायामा परिन्छ । त्यसैले यो निकै प्रतिस्पर्धा र संघर्ष गरिरहनुपर्ने क्षेत्र हो । सधै उत्कृष्ट प्रस्तुति दिनुपर्ने हतारो यस क्षेत्रमा रहिरहन्छ ।
सांगीतकि क्षेत्रको विकासका लागि के हुनुपर्छ वा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
नेपाली संगीत क्षेत्र निकै अल्योलताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । संगीतमा निरन्तर लगानी भइरहेको छ । तर लगानी उठाउने कुनै माध्यम तयार हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रमा वार्षिक २÷३ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी हुने गरेको छ । तर सरकारले संगीत क्षेत्रलाई अहिलेसम्म पनि उद्योग मान्न सकिरहेको छैन । यो एउटा ठूलो समस्या हो । पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएपनि लगानी कसरी उठाउने भन्ने समस्या छ । स्रष्टाहरुले दुःख सुख गरेर लगानी त गर्छन् । तर त्यो लगानी उठने वातावरण नभएपछि निरन्तर यस क्षेत्रमा टिकिरहन समेत चुनौति हुन्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुन आवश्क छ । सरकारले संगीत क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा घोषणा गरेर सांगीतिक क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त नीति ल्याउन आवश्यक छ । यसबाट मात्र यस क्षेत्रले फड्को मार्न सक्छ ।
तपाईका आगामी दिनका योजनाहरु के के छन् ?
हाल पाँच वटा चलचित्रका गीतमा संगीत भर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै अन्य एकल एल्बमहरु फुटकर गीतहरुमा संगीत भर्ने काम पनि भइरहेको छ । एउटा महत्वपूर्ण काम भनेको मेरो संगीत र राजुबाबु श्रेष्ठको एकल शब्द रहेको पुस्ता नामक एल्बमको तयारी भइरहेको छ । जसमा अग्रज गीतकारहरुको स्वर रहने छ । आगामी दिनमा पनि गीत संगीतमै लागिरहने र नेपाली संगीत क्षेत्रको विकासका लागि निरन्तर लागिरहने अठोट बोकेको छु ।